13.03 Ny habokana eo amin'ny olona
Anio Talata 13 Marsa 2018 dia ny Levitikosy 13.1-28, no sakafom-panihintsika ka hojerentsika ao anatin' io ny hoe inona no lazainy momba an' Andriamanitra Ray ? Jesoa Kristy na ny Fanahy Masina ? sy ny hoe inona no ampianariny momba ny olombelona ? inona no toetra tsara alain-tahaka na tsy tokony hatao ?
1 Ary Jehovah niteny tamin’ i Mosesy sy Arona ka nanao hoe :
2 Raha misy mamontsina eo amin’ ny hoditrin'ny nofon’ ny olona, na misy manako-pery na misy mifaritra mangirana, ka eo amin’ ny hoditry ny nofony tahaka ny habokana izany, dia ho entina ho eo amin’ i Arona mpisorona izy, na ho eo amin’ izay iray amin’ ny mpisorona, zanak’ i Arona;
3 koa raha zahan’ ny mpisorona ny aretina eo amin’ ny hoditry ny nofo, ka efa niova ho fotsy ny volo eo amin’ ny aretina, ary efa lalina noho ny hoditry ny nofo no fijeriny ny aretina, dia habokana izany; ary raha zahan’ ny mpisorona izy, dia hataony hoe maloto.
4 Fa raha misy mifaritra fotsy mangirana kosa eo amin’ ny hoditry ny nofony, nefa tsy lalina noho ny hoditra no fijeriny azy, ary tsy niova ho fotsy ny volony, dia hatokan’ ny mpisorona toerana hafitoana ilay marary.
5 Ary raha zahan’ ny mpisorona amin’ ny andro fahafito izy, ka hitany fa tsy mitombo ny aretina sady tsy manitatra eo amin’ ny hoditra, dia hatokany toerana hafitoana indray izy;
6 ary raha zahan’ ny mpisorona indray amin’ ny andro fahafito izy, ka hitany fa matromatroka ny aretina sady tsy manitatra eo amin’ ny hoditra, dia hataony hoe madio izy: manako-pery ihany izany, ka hanasa ny fitafiany izy, dia hadio.
7 Fa raha nanitatra teo amin’ ny hodiny kosa ny manako-pery, taorian’ ny nisehoany tamin’ ny mpisorona ny amin’ ny fanadiovana azy, dia hiseho amin’ ny mpisorona indray izy.
8 Ary raha zahan’ ny mpisorona izy, ka hitany fa manitatra eo amin’ ny hoditra ny manako-pery, dia hataony hoe maloto izy: habokana izany.
9 Raha misy habokana amin’ ny olona, dia ho entina any amin’ ny mpisorona izy;
10 ary raha zahan’ ny mpisorona izy, ka hitany fa misy mamontsina fotsy eo amin’ ny hoditra, sady efa niova ho fotsy ny volo, ary misy nofo mangenahena hita eo amin’ ny mamontsina,
11 dia habokana efa ela teo amin’ ny hoditrin'ny nofony izany, ka hataon’ ny mpisorona hoe maloto izy; tsy hatokany toerana akory izy, fa efa maloto.
12 Ary raha mipoipoitra mihitsy eo amin’ ny hoditra ny habokana, ary manenika ny hoditr’ ilay marary hatramin’ ny lohany ka hatramin’ ny tongony, na aiza na aiza zahan’ ny mpisorona,
13 ary zahan’ ny mpisorona, ka hitany fa manenika ny tenany rehetra ny habokana, dia hataony hoe madio ilay marary; fa efa niova ho fotsy avokoa izy, ka dia madio.
15 Ary raha zahan’ ny mpisorona ny nofo mangenahena, dia hataony hoe maloto izy; fa maloto ny nofo mangenahena: habokana izany.
16 Ary raha miova ny nofo mangenahena ka tonga fotsy, dia hankeo amin’ ny mpisorona izy;
17 ary raha zahan’ ny mpisorona ilay marary, ka hitany fa tonga fotsy ny aretina, dia hataon’ ny mpisorona hoe madio izy, fa efa madio.
18 Ary raha misy fery sitrana eo amin’ ny hoditry ny nofo,
19 ary misy fotsy mamontsina eo amin’ ny holatry ny fery, na misy holamena, dia hiseho amin’ ny mpisorona izy.
20 Ary raha zahan’ ny mpisorona izy, ka lalina noho ny hoditra no fijeriny azy, ary efa niova ho fotsy ny volony, dia hataon’ ny mpisorona hoe maloto izy: habokana efa mipoitra eo amin’ ny fery izany.
21 Fa raha zahan’ ny mpisorona izy, ka hitany fa tsy misy volo fotsy eo, ary tsy lalina noho ny hoditra izy sady matromatroka ihany, dia hatokan’ ny mpisorona toerana hafitoana izy;
22 ary raha nanitra mihitsy teo amin’ ny hoditra izany, dia hataon’ ny mpisorona hoe maloto izy: habokana izany.
23 Fa raha tsy mitombo ny faritra mangirana, ka tsy manitatra, dia fahamaimaizana eo amin’ ny fery izany; ary hataon’ ny mpisorona hoe madio.
24 Ary raha misy main’ ny afo eo amin’ ny hoditry ny nofo, ary hita ny may, fa mitarehi-kola-mena,
25 ary zahan’ ny mpisorona ka hitany fa efa niova ho fotsy ny volo eo amin’ ny itoeran’ ny mifaritra mangirana, ary lalina noho ny hoditra no fijeriny azy, dia habokana efa mipoipoitra eo amin’ ny may izany, ka hataon’ ny mpisorona hoe maloto, habokana izany.
26 Fa raha zahan’ ny mpisorona izy, ka hitany fa tsy misy volo fotsy eo amin’ ny mifaritra mangirana, ary tsy lalina noho ny hoditra izy sady matromatroka ihany, dia hatokan’ ny mpisorona toerana hafitoana izy,
27 ary raha zahan’ ny mpisorona amin’ ny andro fahafito izy, ka nanitatra mihitsy teo amin’ ny hoditra izany, dia hataony hoe maloto: habokana izany.
28 Ary raha tsy mitombo ny faritra fotsy mangirana ka tsy nanitatra teo amin’ ny hoditra, fa matromatroka ihany, dia mamontsina eo amin’ ny may izany; ary hataon’ ny mpisorona hoe madio izy fa fahamaimaizana ihany izany.
NY HABOKANA EO AMIN’NY OLONA
Maharikoriko ny habokana na vao miandoha (2-3), na efa mitatra (7), na mamontsina fotsy (10) na mangenahena (14).
Toy izany koa, na inona na inona endrika sy halalin’ny fahotana dia halan’Andriamanitra satria masina Izy (1Petera 1.16).
Ny fivoaran’ny habokana.
Tsy tonga tampoka ny habokana fa nisy fiandohany toa fery kely tsy hita akory, mihombo, mitatra manenika ny vatana manontolo.
Nanome vahaolana ho an’ny Zanak’Israely Andriamanitra dia ny fanatonana ny mpisorona raha vao manomboka misy famantarana.
Toy izany ny fahotana eo amin’ny fiainan’ny olona : manomboka amin’ny fakam-panahy toa tsy mampaninona, kolokoloina iny dia lasa filana, ary hy filana torontoronina miteraka ota, ny ota tanteraka miteraka fahafatesana (Jakoba 1.14-15).
Dieny vao miandoha ny fakam-panahy, dieny tsy mbola tonga zavatra mamatotra sarotra ialana, dia manatòna miresaka amin’ilay Mpisorona Lehibe indrindra sady Mpisolovava antsika eo anatrehan’ny Ray dia Jesoa Kristy Ilay Marina, avotra ho antsika (Hebreo 7.24-25, 1Jaona 2.1-2).
Ny fihanakin'ny habokana.
Mifindra amin’izay manakaiky sy mifampikasoka aminy ny habokan’ny olona iray.
" Izany dia tahaka ny nidiran’ny ota avy tamin’ny olona iray (Adama) ho amin’izao tontolo izao, ary ny ota no nidiran’ny fahafatesana ka nahatratra ny olona rehetra " (Romana 5.12).
Fa avy amin’olona iray koa, dia Jesoa Kristy, no andraisana ny fanamarinana sy ny fahasoavana be (5.15).
Io Jeso Kristy io no afaka manadio antsika ho afaka amin’izay mety ho habokana rehetra eo amin’ny fiainantsika (1Jaona 1.9).
Jeso ô !
“ Sasao madio aho mba ho afa-keloka.
Ary diovy aho mba ho afa-pahotana. ”